Trump iyo Obama oo weerar afka ah isku dhaafsaday dadka hortooda | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Trump iyo Obama oo weerar afka ah isku dhaafsaday dadka hortooda
Trump iyo Obama oo weerar afka ah isku dhaafsaday dadka hortooda
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka isaga xilka kaga horeeyay Barack Obama ayaa ereyo kul kulul is dhaafsaday intii ay socodeen isu soo bax dadweyne oo ka kala dhacaya gobolada Mareykanka.
Obama ayaa Trump ku eedeeyay in uu yahay cunsuri ay ku fogaatay sareynta caddaanka, dhankiisa madaxweyne Trump oo ka hadlayay kulan lagu qabtay gobolka North Carolina ayaa Barack Obama ku durey in uu isku dayay sidii uu u khaldi lahaa natiijada doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka.
13 maalin ayaa ka harsan codbixinta madaxtinimada Mareykanka ee sadexda bisha November, gobolo tiro yar ayaana ay kuwa go’aaminaya natiijada doorashada November.
42 oo qof ayaa codkooda dhiibtay ilaa iyo hadda, kuwaas oo intooda badan ku codeeyay adeega boostada.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ololihiisa uu aad u sareeyo, halka ninka ay loolamayaan ee Joe Biden uu ku tilmaamay in uu sii liidanayo.
Mr. Biden ayaa isu diyaarinaya doodda caawa uu la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka, dhinaca kale,Trump waxaa uu xoogga saareyaa sidii u qasban lahaa codadka dadweynaha gobolada muhiimka ah ee Mareykanka.
Donald Trump ayaa Obama ku eedeeyay in uusan laheyn mowqif cad oo ku aadan cidda qabanaysa hogaanka Mareykanka, isagoo sheegay in Obama uu ka labo labeeyay in ku xigeenkiisii Biden u xusho murashaxa xisbiga Dimoqraadiga.
2016, madaxweyne Obama ayaa la sheegay in Mr. Biden uu ku caddaadiyay in uu u tanaasulo Hillary Clinton, isagoo aaminsanaa in ay ka adkaan karto Trump.
Madaxweynihii hore, Barack Obama oo ka hadlayay, kulan ka dhacay magaaladda Philadelphia ayaa si weyn ugu dhaliilay siyaasadda Trump ee ku aadan wax ka qabashada cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo Mareykanka si weyn u saameeyay.
Obama ayaa yiri, haddii Mr. Biden guuleysto “ ma noqon doono madaxweyne qof kasta caaya isla markaana dadka ugu hanjaba in uu xiri doono. Taasi hab-dhaqan madaxweyne ma ahan”.
Mr. Obama oo kamid ah dadka caanka ah ee xisbiga dimoqraadiga ayaa codbixiyeyaasha Mareykanka ku boorinaya in ay doortaan Joe Biden, isagoo kulamo olole dadweyne ku qaban doona gobolada muhiimka ah sida; Florida, magaalada Miami iyo Orlando oo uu sabtida ku wajahan yahay.